I-Calrec Debuts I-New Impulse Core ku-NAB Bonisa iNew York - NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat. Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show, Umkhiqizi we-NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Okufakiwe » I-Calrec Debuts I-New Impulse Core ku-NAB Bonisa iNew York
Umgogodla oyinhloko yinkimbinkimbi yokucubungula umsindo kanye nenjini yokuhamba nge-AES67 futhi SMPTE Ukuxhumeka kwe-2110. Ngokuxhumana ngokulawula nge-IP, ukufakwa kungase kube kude futhi kuxhunywe kunamanethiwekhi ajwayelekile usebenzisa i-COTS hardware. Lolu buchwepheshe lwenza wonke amakhasimende e-Calrec enze ushintsho kumsindo wesizukulwane esilandelayo (NGA) kanye nezizinda ze-IP, futhi unikeze ukuguquguquka ukwenza kanjalo ngaphandle kwemishini yokukhiqiza.
"Umgogodla womgudu wesikhulumi se-DSP esiphezulu kakhulu futhi esingenakunyakaziswa esivumelanisa nezinhlelo zokuthuthukiswa kwekusasa likaCalrec, njengoba siqhubeka nokuguquka futhi sinikeze amakhasimende ethu indlela yokuthuthukiswa kwe-IP," kusho uDave Letson, i-VP yokuthengisa kaCalrec. "Njengoba i-IP iba ​​yanda kakhulu, kungumgomo kaCalrec wokunciphisa izindleko zalolu shintsho futhi kube yinto enhle kakhulu kumakhasimende akhona namasha afuna ukuthuthukiswa emisebenzini yakamuva yakamuva."
Umfutho uhlinzeka nge-3D indlela emamandla emithambo kanye ne-panning yezinhlelo zokusebenza ze-NGA, i-5.1, i-5.1.2, i-5.1.4, i-7.1, i-7.1.2 ne-7.1.4 iziteshi zokufaka, amabhasi, ukuqapha nokulinganisa kuyatholakala. I-router AoIP ebalulekile, esekela ngokugcwele ukutholakala kwe-NMOS nokuxhumeka, kanye nokutholakala kwe-mDNS / Ravenna. Ama-cores amabili we-5U Impulse angahlanganiswa ukuze ahlinzekwe ngokugcwele futhi angaba kude nakakhulu komunye nomunye ukuze abuyele enhlekeleleni.
Ngokungeziwe kumgogodla we-Impulse, i-Calrec izobonisa uhlobo lwayo R, olwandiswayo, isistimu yomsakazo we-IP embukisweni. Thayipha uhlelo lwe-R lokulawula ngokomzimba luqukethe amaphaneli amathathu kuphela e-slimline: iphaneli yefader, iphaneli elikhulu elithambile nephaneli elincane elithambile. Umthombo we-2U olula nezinsiza ezihlanganisiwe ze-I / O kuvumela amakhasimende ukuba asebenze ngokushesha. Ingqikithi eyodwa ingakwazi ukuphakamisa izindawo ezintathu ezizimele zokuxuba, kungekho ukwabelana kwezinsiza ze-DSP. Ikhono lokusebenzisa izinjini eziningi zokuxuba ezihlangene nokulula kwenethiwekhi ehambisanayo ye-AES67 inikeza ukuguquguquka okwanele ukuhambisana nezidingo zomsakazo ezishintsha ngokushesha.
Ukuthuthukiswa kukaCalrec ku-Brio kududuzeka ngolwazi lwesiteshi olwandisiwe kuzophinde kuboniswe ku-NAB NY. Amaphakheji amasha wokunweba ukwandisa isibalo se-Brio12 DSP kusuka ku-48 kuya ku-64 iziteshi zokufaka kanye ne-Brio36 kusuka ku-64 kuya ku-96 yokufaka iziteshi. Amaphakethe wokunwetshwa kwe-DSP atholakalayo kuwo wonke ama-consoles we-Brio ku-software ye-V1.1.6 noma ngenhla; Ukuthuthukiswa kwesofthiwe kukhululekile kulandela ukubhaliswa kwe-Brio ku www.calrec.com/brioregistration.
I-Calrec Audio izinikezelwe kuphela ekugqibeleni ekuxubeni okulalelwayo ekukhiqizeni emoyeni nasekukhiqizeni bukhoma. Isazi somsakazo esingaphezu kweminyaka engu-50, i-Calrec iye yasungula izintandokazi eziningi zedijithali ezixhaswe ngabasakazo abaphumelela kakhulu emhlabeni. Ukwandisa. izincomo ziyizingxenye eziyinhloko kunethiwekhi yonkana-indawo, okwenza kube nemisebenzi eguquguqukayo yokusebenza, imithombo yokwabelana kanye nekhono lokukhuliswa kalula. Kusukela ekuqaleni, iCalrec idale izixazululo ezintsha eziye zavumela abasakazwayo ukuba bathuthukise izindlela zabo zokusebenza futhi bathole inani elikhulu emishini yabo. Ukuze uthole izixazululo zomsindo we-premium, abasakazo babeka ithemba labo ku-Calrec. Ukwaziswa okwengeziwe kuyatholakala ku Calrec.com.
Landela I-Calrec Audio:
Zonke izimpawu zokuhweba ezivela lapha zingumnikazi wabanikazi bazo.
I-IMT Vislink ne-SpacePath Co-Exhibit e-AfrikaCom 2018 - Novemba 7, 2018
2015 Ukuncipha kwe-bitrate Injini yokusakaza Ukusakaza Ubunjiniyela I-Calrec Audio Control System H264 / H265 HDR I-HDR / i-WCG HEVC HEVC / AVC Immersive I-isovideo I-JCT-VC Ukunciphisa komsindo Ama-spears nama-Arrows UHD / 4K / HD I-Ultra HD Forum I-viarte Umlingisi wevidiyo Warsaw	2018-10-11
Ngaphambilini: Umngane we-MTS uqoka u-Justin Paul njengoMphathi Wezohwebo
Olandelayo: I-Arvato Systems iwina iphrojekthi enkulu yokuphathwa kwemigwaqo nokuphathwa kwamalungelo ku-RTÉ Ireland
Hey Buddy !, Ngithole lo lwazi kuwe: "I-Calrec Debuts New Impulse Core ku-NAB Bonisa eNew York". Nasi isixhumanisi sewebhu: https://www.broadcastbeat.com/calrec-debuts-new-impulse-core-in-the-big-apple/. Ngiyabonga.